Bolgaria, Masedonia: Adin’ny blaogy momba ny tantara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2009 16:55 GMT
Ny fifandraisana eo amin'ny Bolgaria sy Masedonia dia mbola manahirana sy sarotra takarina noho ny misy eo amin'ny Grika sy Masedonia, na dia vao haingana teo aza iry voalohany no nalaza kokoa tamin'ny haino aman-jery noho ity farany. Mbola ny tantara ihany no olana goavana eo amin'ny Sofia sy Skopje.
Ho an'ireo Bolgara, ampahany tamin'ny firenena Bolgara ny Masedoniana hatramin'ny fiantombohan'ny taon-jato faha 20, raha lasa teo ambany fahefan'ny Serbiana ny ampahany betsaka tamin'ny Masedoniana taorian'ireo ady tao Balkan. Avy eo, noho ny politikan'i Serbia tao amin'ny faritra sy ny “doctrine” Macedonism, nisy ny fiovana teo amin'ny fisainan'ny mponina teo an-toerana, izay nitondra tamin'ny fiforonan'ny firenena Masedoniana. Ny Comintern sy ny toerana nisy an'i Staline tanatin'ny olana koa dia nandray anjara tamin'ity vokatra ity.
Ny Masedoniana, amin'ny lafiny iray hafa, dia mandray ny tenany ho firenena hafa mihitsy, mpandova ny mponina taloha. Miampanga ny Bolgara “mpiray vodirindrina” aminy izy ho mpanani-bohitra ao amin'ny tanin-dry zareo ary manambara fa miezaka ny maka ampahany amin'ny tantaran'i Masedonia ny Sofia, ohatra, toa an-dry mpanjaka Samoela, St. Kliment Okhridski, ilay revolosionary Gotze Delchev, sns.
Mandefa fiampangàna sahala amin'izany ho an'i Masedonia koa ny Bolgara.
Manamafy ny ady koa ny tahotra avy any Masedonia, fa hoe mitady hitelina ny Masedoniana ny Sofia, ny Bolgara indray dia miahiahy ireo “mpiray vodirindrina” aminy ho mitady haka ny faritr'i Pirin, izay ampahany amin'ilay antsoina hoe Masedonia Lehibe.
Niraraka teo amin'ny tontolo virtoaly avokoa izany fanoherana izany ary niteraka “ady” maharitra teo amin'ny mpitoraka blaogy Bolgara sy Masedoniana momba ny tantara – ady izay matetika dia mihoatra ny lalànan'ny “bon ton”. Ary ny tontolon'ny blaogy Bolgara koa dia miady hevitra momba ny tokony ho fihetsiky ny Bolgaria manoloana an'i Masedonia.
Ilay mpitoraka blaogy Peter Stoykov dia nanoratra (BUL):
Fanohanan-kevitra maromaro momba ny hoe i Masedonia ve dia mitambatra na nitambatra tamin'i Bolgaria, misy fiteny Masedoniana, zom-pirenena, ny raharaha Masedoniana, ary ny tombontsoan'ny Bolgara amin'ny Masedonia… Ny manam-pahaizana momba ny tantara, ny mpanao politika, ary, indrindra indrindra, ireo ‘tsy ampy saina’ eto amin'ny aterineto dia mifaninana miteniteny foana momba ilay resaka, toy ireny hoe miankina amin'izany iny ery ny ain'izy ireo.
Bolgara ve i Masedonia?
Tsia, tsy Bolgara izy, fa Masedoniana. Ary hoteneniko anao ny antony, nefa voalohany dia hitodika amin'ny fotoan-dasa aho. Tamin'ny 2001, nisy fanisam-bahoaka tany Aostralia. Tamin'io fotoana io koa no namoahana tamin'ny ampahany ny Star Wars ary araka ny fantatrao, be ny olona adalan'io sarimihetsika io. Ao amin'ny faritra natokana haemtrahana ny foko niaviana ao amin'ny fanadihadiana tamin'ny fanisam-bahoaka, nisy “mpanadala” sasany nanoratra hoe “Jedi”… […] Inona no idiran'izany amin'i Masedonia? Raha te hiantso ny tenany ho Masedoniana ny Masedoniana, dia manan-jo tsy misy hiadiam-barotra ny hanao izany izy ireo.
Noho izany, inona no tokony hataontsika amin'ity resaka Masedoniana ity?
Raha ny tokony ho izy, faly ihany aho fa tsy mitambatra amin'ny Bolgaria i Masedonia ary taona maro lasa izay dia nesorina tamin'i Bolgaria izy ka nomena an'i Yogoslavia. I Bolgaria, araka ny fiteny nahafatifaty ireo mpanao politikantsika, “dia fototry ny fahamarinan-toerana [fitoniana] any Balkan” – mangotraka manodidina antsika ny fikorontanana, nisy ady sy fivakisana tany Yogoslavia, teo ambony latabatra i Kosovo, niady an'i Chypres tamin'ny Tiorka ny Grika, miady amin'ny Kiorda ny Tiorka, efa nihoatra ny faritr'i Iraka ry zareo, dimy taona lasa izay dia nanao zavatra izay tena nitovy tamin'ny “révolution” tany Masedonia ny Albaniana, nifampitifitra mihitsy.
Raha tao anatin'i Bolgaria i Masedonia, dia mety ho ao anatin'izao hadalàna izao isika.
Mpitoraka blaogy fanta-daza iray hafa, Peter Dobrev, dia namaly (BUL):
Tanindrazan'ny fanahy Bolgara i Masedonia. Ary na ho lasa fasany aza izy, tsy hanatsahatra ny ady ho an'ny fahafahany izahay.” Io no lohateny navoakan'ilay gazety Outro miely patrana tamin'ny niandohan'ny adin'ny Balkan. Io no hevitra nanjaka hatramin'ny 1944 (tamin'ny nangalan'ny kaominista ny fahefàna tao Bolgaria). Ankehitriny anefa, na dia eo aza ny hoe tokony namelan'ny Bolgaria ny fananganana foto-kevitra tsy refesi-mandidy, very tanteraka ny fahatsiarovana an'i Masedonia ka nisosa ho amin'ny fiandaniana tsy misy fepetra.
Tsy mahagaga raha miheritreritra ilay mpitoraka blaogy Peter Stoykov fa tsy misy izany resaka Masedoniana izany, fe ny Masedoniana dia Masedoniana, ary izay rehetra manohatra izany dia ireo “tsy ampy saina eto amin'ny aterineto.”
Samy nomen'Andriamanitra zo amin'ny fahafahana manapa-kevitra daholo ny tsirairay – amin'ny maha Jedi, Eskimo na Masedoniana. Na izany aza, rehefa resaka aim-pirenana, ka nandatsahana ain'olona an'arivony sy niteraka fanovàna teo amin'ny hoavin'ny efa ho antsasaky ny mponina, dia tsara ihany ny itondrana ny resaka amin'izay kely indrindra mety ho fahaiza-mandinika sy fahalalana anànana. Ilaina ny manavaka ny hevitry ny tena manokana amin'ny toe-javatra ara-tantara tsy miangatra…
Satria efa fantatry ny rehetra ankehitriny fa Grika i Alexandre Lehibe, dia tsy misy hiadiam-barotra intsony fa Bolgara daholo ireo rehetra mpitarika ny fikambanana Masedoniana taorian'ny 1878 (taonan'ny kongresin'ny Berlin izay narahin'ny fanavotana/fanafahana an'i Bolgaria). Ireo mpitarika ireo, toy ny mponina amin'ny ankapobeny, dia niresaka momba azy ireo toy ny Bolgara, ary noraisin'ny mpanara-maso vahiny ho sahala amin'izay. Ireo mpanara-maso vahiny rehetra, eny fa na ireo Serba aza.
Mamintina ny toe-tsaina amin'ny ankapobeny amin'ny fifandraisana any Masedonia ireo hevitra roa ireo. Tsy mitaky na inona na inona amin'ny “mpiray vodirindrina” aminy ny ankamaroan'ny Bolgara, no tsy te-hiditra amin'ny raharaham-pireneny koa, nefa betsaka no voarangitry ny fandrahonana ataon'ny Masedoniana amin'ny fanaronana ampahany amin'ny tantaran-dry zareo ka te hametraka ny marina ara-tantara. Feo sahala amin'izany koa no heno any Masedonia.
Ao anatin'izany ady eo amin'ny mpitoraka blaogy Bolgara sy Masedoniana izany, nanoratra tao anatin'ny ANTIblog-ny ilay mpitoraka blaogy Masedoniana Ivica Anteski (MKD):
Raha tsy mifanaraka ny “marina” Bolgara sy Masedoniana, dia midika izany fa tsy misy marina izy ireo (na farafaharatsiny ny iray amin'izy ireo). Lojika tsotra. Ary eny amin'ny fitsarana, rehefa mitondra fijoroana vavolombelona mifanohitra ny vavolombelona roa, dia tsaraina amin'ny alalana karazana fifanandrinana izany. Nefa tsy te-hampifanatrika na iza na iza ireo manam-pahaizana ara-tantara. Mety kokoa raha izahay samy mpitoraka blaogy aloha no miady eto amin'ny aterineto, toy izay hahita ireo manam-pahaizana hamaha ny fifanolanana amin'ny herin'ny tohan-keviny.
Ireo tampom-pahaizana, mpahay tantara, philologists, akademisiana, ireo manampahaizana manokana (Masedoniana sy Bolgara) momba ny Slaves !!! Miaraha mipetraka dia teneno anay hoe aiza ny olana. Mifanaraha! Hadinoy ny maha Masedoniana na Bolgara anao – tsy mitondra anaram-pihaviana ny tampom-pahaizana . Ny marina sy ny tena zava-misy no anaram-pihavian-dry zareo. Vahao ny olana.
Anatina tontolo toy izany, ny 31 Marsa, andro vitsivitsy alohan'ny fihaonamben'ny ‘OTAN any Bucharest, ny Manfred Woerner Foundation any Sofia sy ny Atlantic Club of Bulgaria dia nanolotra ny “brochure” mitondra ny lohateny hoe “Ny politika Bolgara any amin'ny Repoblikan'i Masedonia”, izay nosoratana vondrona mpahay tantara Bolgara, mpanadihady Balkan sy diplaomaty tampom-pahaizana.
Sary: komitata.blogspot.com (CC 3.0)
Ny tanjon’ity famoahana ity dia mba ho ampiasaina amin’ny tetika famaritana ny politika Bolgara momba an'i Masedonia. Ilay mpitoraka blaogy Konstantin Pavlov, izay nanatrika ny fanolorana, dia namoaka ity tatitra manaraka ity (BUL):
Eo an-dalam-pidirana ao amin’ny UE sy ny OTAN ny Repoblikan’I Masedonia. Mbola tsy mazava aloha ny hoe rahoviana no tena hitrangàn’izany. Ny olana dia mipetraka amin’ny hoe, ao amin’ny fototry ny fifamaliana eo amin’ny Grika sy Masedonia, ny ankamaroan’ny mpanao politika mahaleo tena sy ireo mpanara-maso dia mitongilana amin'i Masedonia, nefa koa tsy dia mandefa fisainana loatra amin’io. (Davida sy Goliata). Ary na dia miteraka “sympathie” ho an’I Masedonia aza izany fifamaliana manodidina ny anarana izany, ireo tohan-kevitra nampiasaina – Masedonia taloha, izay mbola nahavelon-tena hatramin'ny anio, ireo mponina “autochtone” Masedoniana , nandevozina sy noteren'ireo ratsy saina mpiray vodirindrina aminy ho toy izany, ao anatin’izany ireo Bolgara ratsy saina, dia miha-mahazo vahana miaraka amin’ny fanohanan'ireo olona nomba an’i Masedonia. Mety hiteraka voka-dratsy ho an’ny Bolgaria izany fombàna izany, ohatra hoe, fanafoana ny 24 May ho andro tsy fiasana […]. Toa ohatran’ny tsy ratsy ny boky momba an’io (Tsy nanana herim-po hamaky azyio aho) ary, indrisy, voasoratra amina fiteny sarotra, ‘pseudo-scientifique’ miaraka amina tanjona tsy dia mazava loatra. Toa nifanohitra tamin’ny tanjona nokinendry ny vokatra azo – hanoratra politikam-panjakana Bolgara mazava, lojika sy tsy miolakolaka (mahitsy, mitera-bokatra) hiatrehana ny fanamby avy ao Masedonia. Tsy tontosa tsara izy io.
Taorian’ny famakiana ilay boky sy ny tatitr’i Pavlov dia nanoratra ilay mpitoraka blaogy Masedoniana Volan (MKD):
Mivandravandra be ny zava-kinendrin’ny politika Bolgara – vahoaka iray – firenena roa …
Mazava fa tsy ho voavaha ny olana eo amin’ny Skopje sy Sofia raha tsy ny fomba fijerin'ny Balkan ny tantara ho toy ny fananany, ary raha mbola misy foana ny hoe “ahy” sy “anao” – amin’izay lafiny izay, eo amin’ny Masedoniana sy ny Bolgara.